Kihon-dalan’ny tantara iny fifidianana iny: mitarika vonjimaika ny kandidà Rajoelina | NewsMada
Kihon-dalan’ny tantara iny fifidianana iny: mitarika vonjimaika ny kandidà Rajoelina
Raha ny voka-pifidianana vonjimaika, hatramin’ny fotoana farany nanoratana, mitarika vonjimaika ny kandidà Rajoelina. Etsy andaniny, nisongadina ny fihenan’ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy. Na izany aza, hanamarika ny tantara sady kihon-dalana eto amin’ny firenena iny fifidianana notanterahina, omaly, iny.
Raha ny voka-pifidianana notaterin’ny haino aman-jerin’ny fanjakana, omaly, mitarika amin’ny biraom-pifidianana maromaro ny kandidà laharana faha-13. Misy ny elanelana be eo aminy sy ny kandidà laharana faha-25 amin’izany, indrindra any amin’ny faritra. Tsy vitan’izany fa na mitarika aza ny kandidà Ravalomanana eto Antananarivo sy ny manodidina, tsy lavitra ny elanelam-bato eo amin’ny roa tonta. Misy koa anefa biraom-pifidianana sasany, itarihan’ny mpanorina ny Tim ihany.
Nahazo ny 64% ny kandidà Rajoelina
Ohatra, amin’ny voka-pifidianana avy any Mampikony, birao fandatsaham-bato 14 amin’ny 16 efa nahazoana vokatra. 42,20% ny taham-pahavitrihana. Nahazo vato 1 805 ny kandidà Rajoelina raha 1 485 kosa ny kandidà Ravalomanana. Nitarika 122 Rajoelina raha nahazo 109 Ravalomanana. Nifamadika indray izany amin’ny BV iray ka mitarika 111 ny kandidà faha-25 raha nibata ny 95 ny laharana faha-13. Nitarika amin’ny vato 85 Ravalomanana raha 55 Rajoelina.
Etsy andaniny, araka ny voka-pifidianana navoakan’ny Ceni hita ao amin’ny tranonkalan’ny “Orange.mg”, alina tamin’ny 9 ora latsaka fahefany, mitarika 64,20% ny kandidà Rajoelina raha 35,80% ny kandidà Ravalomanana. Voka-pifidianana amin’ny BV miisa 38 amin’ny 24 852 ireo. 37% mahery kosa ny taham-pahavitrihana
Nitovy tanteraka ny isam-baton’ny kandidà roa
Voka-pifidianana ao Toamasina amin’ny BV miisa telo. Samy 75 avy ny kandidà roa tonta. Samy nahazo vato mitovy 69 avy izy ireo. Nanantombo 83 kosa ny kandidà Rajoelina tamin’ny BV iray raha 79 ny an-dRavalomanana. Nihena kosa amin’ny ankapobeny ny vato fotsy sy ny maty satria latsaky ny 10 izany. Misy roa na iray nefa nihoatra lavitra be izany tamin’ny fihodinana voalohany.
Nidina ny taham-pahavitrihana
Andranonahoatra Atsimondrano, fokontany roa ny nahazoana vokatra. Nitarika ny kandidà Ravalomanana, nahazo 1 428 raha nibata ny 921 kosa Rajoelina. Mbola nitarika ihany ny laharana faha-25 ka nahazo 2 602 raha nahazo ny 1 428 ny laharana faha-13.
Momba ny taham-pahaivitrihana kosa, tena nidina ambany raha mitaha ny tamin’ny fihodinana voalohany satria eo anelanelan’ny 30 sy 40% latsaka eo izany. Tsy mazava ny antony. Manampy izany ireo tranga samihafa araka ny lahatsoratra etsy ambany, toy ny tsy fahatomombanana amin’ny fikarakarana.
Na izany aza anefa, hipetraka eo amin’ny tantara ary hitondra ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho any amin’ny pejy vaovao iny fifidianana iny. Andrasana ny ho tohiny…